Puntland oo tafaasiil ka bixisay dagaalkii shalay dhex maray ciidanka dawlada & Al-Shabaab. – Radio Daljir
Puntland oo tafaasiil ka bixisay dagaalkii shalay dhex maray ciidanka dawlada & Al-Shabaab.
Maarso 4, 2012 12:00 b 0
Bosaso,Mar 4 -Wasiir kuxigeenka wasaaradda amniga iyo hubka dhigista dowladda Puntland Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed oo shir jara’id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Boosaaso ayaa waxaa uu ka hadlay,dagaaladii shalay ay ciidamada dowladda Puntland la galeen ururka Al-Shabaab iyo howlgalada ay dowladda waddo xiligaan.
Wasiirka, ayaa ugu horayntii sheegay inuu hambalyo u dirayo ciidamada Puntland oo uu sheegay inay guullo kasoo hoyeen dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Maraje ee katirsan deegaanka Galgala ee gobolka Bari.
Waxaa sidoo kale wasiirku uu tacsi u diray ehelada ay ka geeriyooday laba ka mid ah ciidamada Puntland oo dagaalkii shalay ku geeriyooday,waxaana uu caafimaad u rajeeyay shan ka mid ah ciidamada oo dagaaladii shalay ku dhaawacmay.
Wasiirka ayaa sheegay inay dileen todobo ka mid ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab,ayna dowladdu la wareegtay deegaanka Maraje oo ay shalay galeen maleeshiyaadkii habeen hore soo weerartay kantoroolka koonfureed ee Boosaaso.
Wasiirka oo wax laga weeydiiyay xariga agaasimaha idaacadda Codka Nabadda ayaa waxaa uu hoosta ka xariiqay,xarigaasi inuu la xiriiro cod ay idaacaddu siidaysay oo ahaa guullo ay Al-Shabaabku ka sheegteen dagaaladii ay ciidamada Puntntland ay la galeen.
Wasiirkii hore ee amniga Puntland C/llahi Saciid oo ugu baaqay xukuumadda in ay doorashada madaxwaynaha ee soo socota hirgaliso bilawga sanadka 2013.
Baahin: Sabti, Mar 03, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Galkacyo. Puntland oo ku dishay 7 ka mid kooxda Al-shabaab buuraha Caal-madow, meydkoodana soo bandhigay; Warbixin: hawlgallo burcad badeedda looga sifaynayo xeebta bari ee gobolka Mudug; Wasiir hore uga tirsanaa xukuumada federaalka oo ku sugan Hargaysa.